Mudanayaasha golaha deegaanka Galkacyo oo maalintii 2-aad ku jira kormeer ay ku tagayaan xarumaha laga fuliyo adeegyada dadweynaha. – Radio Daljir
Mudanayaasha golaha deegaanka Galkacyo oo maalintii 2-aad ku jira kormeer ay ku tagayaan xarumaha laga fuliyo adeegyada dadweynaha.
Galkacyo, Apr 19 ? Xildhibaannada golaha deegaanka ee magaalada Galkacyo ayaa waxaa u bilaabatay booqasho ay ku kormeerayaan inta badan xarumaha qaabilsan adeegyada dadweynaha ee ku yaalla magaalada Galkacyo.
Xildhibaannada oo uu hoggaaminayey guddoomiye kuxigeenka golaha deeegaanka Galkacyo Axmed Muuse Nuur, ayaa booqashadoodaan oo shalay u bilaabatay waxay ku tageen cisbitaallada magaalada, xarumaha shirkadaha isgaarsiinta, shirkadda biyaha Galkacyo iyo qaar ka mid ah iskuullada waxbarashada ee magaalada Galkacyo.
Kormeerka golaha deegaanka iyo madaxdoodu ay ku tagayeen xarumaha kala duwan ayaa ku saabsanaa sidii ay ugu kuurgali lahaayeen adeegyada xarumahaasi ku hawllan-yihiin gaar ahaan waxyaabaha muhiimadda leh ee ay ugu toorran-yihiin bulshada magaalada Galkacyo.
Mudanayaasha golaha deegaanka Galkacyo iyo mas?uuliyiintoodu, waxay meelihii ay tageen kula kulmeen madaxda iyo maamulayaasha gacanta ku haya goobaha ay tageen, iyagoo ka wada hadlay arrimo badan oo ay ugu horrayso kobcinta adeegyada ay bulshada ay u hayaan iyo sidii la iskaga kaashan lahaa wixii caqbado ah ee hawlahooda hortaagan.
Kormeerka ay wadaan xubnaha golaha deegaanka ee Galkacyo ayaa lagu wadaa in uu qaado muddo dhawr maalmood iyagoo maalinta berri ahna ay tagi doonaan xarumaha idaacadaha ku yaalla magaalada Galkacyo.
Kasokow kormeerka ay wadaan mudanayaasha golaha deegaanku, waxaa isna intaas u sii dheer qorshe kale oo xildhibaanadu ay doonayaan shirkaduhu in ay kaga qaybqaataan hormarinta degmada taas oo in muddo ah maamulka dawladda hoose ay ku hawllanaayeen.